နိုင်​ငံ​အ​တိုင်​ပင်​ခံ​ပု​ဂ္ဂိုလ်​ဒေါ်​အောင်​ဆန်​စု​ကြည် ​သို့​အိတ်​ဖွင့်​ပေး​စာ - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
​နိုင်​ငံ​အ​တိုင်​ပင်​ခံ​ပု​ဂ္ဂိုလ် ​နှင့် ​နိုင်​ငံ​ခြား​ရေး​ဝန်​ကြီး
​ရက်​စွဲ ၂၆. ၅ . ၂၀၁၆
၃၀ ​ရက် ​မတ်​ချ်​လ ၂၀၁၆ ​တွင် ​ကျွ​နု်ပ်​တို့ “​န​မ္မ​တူ​မြစ်​ကို​ကာ​ကွယ်​စို့” ​အ​စီ​ရင်​ခံ ​စာ​ကို​ထုတ်​ဝေ​ခဲ့​သည်။ ​ထို​အ​စီ​ရင်​ခံ​စာ​တွင် ​န​မ္မ​တူ​မြစ်(​ခေါ်)​မြစ်​ငယ်​မြစ် ​အ​ပေါ် ​ရေ​ကာ​တာ (၄)ေ​န​ရာ ​တည် ​ဆောက်​ရာ​တွင် ​တစ်​ခု​ဖြစ်​သော ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း ​နောင်​ချို​မြို ့​နယ် ​ရှိ ​နော် ​ဝေး​အ​စိုး ​ရ​ပိုင် SN Power ​ကု​မၸ​ဏီ​၏ ​အ​စီ​အ​စဉ် ​ဖြစ်​သည့်​အ​လယ်​ရဲ​ရွာ​ရေ​အား​လျှပ်​စစ် (၇၀၀) ​မီ​ကာ​ဝပ် ​ထုတ်​လု ပ်​မှု ​ရှိ ​ရေ​ကာ​တာ ​အ​တွက် ​စိုး​ရိမ်​ပူ​ပန်​ကြောင်း​ဖေါ်​ပြ​ထား​ပါ​သည်။
​အ​ထက်​ပါ​အ​စီ​ရင်​ခံ​စာ​ကို ​ထုတ်​ဝေ​ပြီး​နောက် SN Power ​ကု​မၸ​ဏီ​မှ ​ဇွန်​လ ၂၀၁၅ ​ခု​နှစ်​တွင် ​ပြု​လုပ်​သည့် pre–feasibility study ​ကို ​အ​ကျဉ်း​ချုပ်​ထား​သော ​အ​ထောက်​အ​ထား​ကို ​ကျွန်ုပ်​တို့​ရ​ရှိ​ထား​သည်။ ​ယ​ခင်​လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​အား​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န ​နှင့် ​စာ​ချုပ်​ချုပ်​ဆို​ချက်​အ​ရ SN Power ​က​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​ရန် feasibility study ​ဆက်​လက်​လုပ်​ဆောင်​နေ​သည်။
​ထို pre–feasibility study ​၏ ​ရ​လဒ် ​မှာ ​ရေ​ဂာာ​တာ​တည်​ဆောက်​ရာ​တွင် ​ကြီး​မား​သည့်​အ​ဟန့်​အ​တား​များ​မ​ရှိ ​ဟု ​ဖော်​ပြ​ထား​သ​ဖြင့် ​ကျွန်ုပ်​တို့ ​လွန်​စွာ​စိုး​ရိမ်​နေ​ပါ​သည်။ ​ကျွ​နု်ပ်​တို့​စိုး​ရိမ်​ရ​သည့်​ချက်​များ​ကို ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း​ဖော်​ပြ​လိုက်​ပါ​သည် –
၁။ ​လေ့​လာ​ချက်​အ​ရ ​လက်​ရိှ​ဖြစ်​ပွား​နေ​တဲ့ ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​အ​တွင်း ​စစ်​ရေး​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​အ​ပေါ် ​ဤ​စီ​မံ​ကိန်​က​မည်​သို့ ​အ​ကျိုး​သက်​ရောက်​မှု​ရှ်ိ​မည်၊ ​ထို့​အ​ပြင် ​ယ​ခု​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ ​ဖြစ်​နေ​မှု​ပေါ်​တွင်​မည်​သို့​သော ​အ​ကြောင်း ​ဆက် ​စပ်​မှု ​ရှိ​သည်​ကို ​ထုတ်​ဖေါ်​ပြော​ဆို​ခြင်း ​မ​ရှိ​သေး​ပါ။ ​ကျွ​နု်ပ်​တို့​ထုတ်​ပြန်​ထား​သည့်​အ​တိုင်း ​တိုင်း​ရင်း ​သား ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​သည့် ​အ​ဓိ​က ​အ​ကြောင်း​အ​ရင်း​က ​သ​ဘာ၀​သံ​ယံ​ဇာ​တ ​ကြောင့်​ဖြစ်​သည်။​တိုင်း​ရင်း ​သား ​လက်​နက်​ကိုင်​များ​နှင့် ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ ​ဖြစ်​ရ​သည့် ​အ​ကြောင်း​ရင်း​မှာ ​တိုင်း​ရင်း​သား​လက်​နက်​ကိုင်​နယ်​မြေ​ထဲ​တွင် ​ပြည်​ထောင်​စု​အ​စိုး​ရ​က ​သံ​ယံ​ဇာ​တ​အ​ပေါ်​ထိန်း​ချုပ် ​လွမ်း​မိုး​ခြင်း၊ ​သံ​ယံ​ဇာ​တ ​ထုတ်​ယူ​ခြင်း ​၏ ​စီ​မံ​ကိန်း ​တစ်​လျောက်​မှာ ​ဗ​မာ့​တပ်​မ​တော် ​တပ်​အင်​အား ​အ​များ​အ​ပြား ​ထပ်​ဖြည့်​နေ​တာ​ကို​တွေ ့​ရ ​သည်။ ​ရှမ်း​ပြည်​နယ် ​မြောက်​ပိုင်း ​တိုက်​ပွဲ ​ဟုန်း​ဟုန်း​တောက်​ဖြစ်​နေ​ချိန်​တွင် pre-feasibility study ​ကောက်​ယူ​နေ​ချိန်​လည်း​ဖြစ်​သည်။ ​သို့​သော်​လူ​ထု​အ​များ​သိ​အောင် ​ထုတ်​ဖော်​ပြော​ဆို ​ရှင်း​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ ​ခဲ့​ပါ။ ​အ​ထူး​သ​ဖြင့်​မ​ကြာ​သေး​မီ ​က ​ကျောက်​မဲ​မြို့​နယ်(​နောင်​ချို​အ​ရှေ ့​ဘက်​ခြမ်း​ရှိ) SSPP/SSA ​နဲ့ ​ဗ​မာ​တပ်​မ​တော် ​စစ်​ရေး ​တင်း​မာ​မှု​ဖြစ်​ပြီး ​အ​ကြီး​အ​ကျယ် ​ထိုး​စစ်​ဆင်​မှု​ဖြစ်​ခဲ့​သည်။ ​တိုက်​ပွဲ​အ​တွင်း ​ဗ​မာ့​တပ်​မ​တော်​သည် ​လေ​ကြောင်း​တိုက်​ခိုက်​ရေး​ဖြင့်​ထိုး​စစ်​ဆင်​သည်။ SSPP/SSA ​၏​ထိန်း​ချုပ်​ထား​သော​နယ်​မြေ​သည် ​ဆောက်​လုပ်​ဆဲ ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ ​၏ ​မြောက်​ဘက်​ခြမ်း​တွင် ​တည်​ရှိ​သည်။ ​ဤ​ကိ​စ္စ​ကို ​ချန်​လှပ်​ခြင်း​သည် ​ခွင့်​လွှတ်​နိုင်​စ​ရာ ​မ​ရှိ​ပေ။ ​စစ်​ပွဲ​များ​ကို ​အ​လေး​အ​နက်​မ​ထား​ခြင်း​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​တို့​စိတ်​ပူ​ပင်​မှု​ဖြစ်​စေ​ပါ​သည်။ ​ထို့​အ​ပြင် SN Power ​သည် ​နော်​ဝေး​အ​စိုး​ရ ​၏ ​ကု​မ္မ​ဏီ ​ဖြစ်​ပြီး ​နော်​ဝေး​အ​စိုး​ရ​က ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​၏ ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး ​ဖော်​ဆောင်​ရေး​ကို ​အ​ထောက်​ပံ့​ပေး​နေ​သော ​ဦး​ဆောင်​နိုင်​ငံ ​လည်း​ဖြစ်​သည်။
၂။ ​သ​ဘာ၀​ပတ်​ဝန်း​ကျင််​နှင့် ​လူ​မှု​အ​သိုင်း​ဝိုင်း ​ထိ​ခိုက်​မှု​ကို​အ​စ​ပြု ​လေ့​လာ​ရာ​တွင် ​အ​လယ်​ရဲ​ရွာေ ​ရ ​ကာ​တာ​ဆောက်​မည့် ​ဧ​ရာ​ယာ​၏​အ​နီး​ဝန်း​ကျင် ​ရေ​လွှမ်း​မည့်​ဧ​ရိ​ယာ​ခန့်​သာ ​လေ့​လာ​ပြီး ​မြစ်​ကြောင်း​တစ်​လျောက်​အ​ပေါ် ​တည်​ဆောက်​မည့် ​ရေ​ကာ​တာ (၅) ​ခု​ကြောင့် ​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​မည့် ​သ​ဘာ၀​ပတ်​ဝန်း​ကျင် ​နှင့် ​ဒေ​သ​ခံ​လူ​ထု ​အ​ပေါ် ​ထိ​ခိုက် ​မှု​ကို ​မ​ဖေါ်​ပြ​ထား​ပေ။ ​သူ​တို့​က “​သ​ဘာ၀​ပတ်​ဝန်း​ကျင်​ဆိုင်​ရာ ​အ​ဓိ​က ​အ​ကြောင်း​အ​ချက် ​အား​လုံး​တို့​၏ ​အ​ခြေ​ခံ ​စစ်​တမ်း ​ကောက်​ယူ​ပြီး​ဖြစ်​သည် ”​ဟု ​ဆို​သည်​မှာ ​မ​ဟုတ်​မှ န် ​ပေ၊ ​သူ​တို့​က “​ဤ​မြစ်​ကြောင်း​နှင့် ​ရေ​လွှမ်း​မည့် ​ဧ​ရိ​ယာ​တို့​မှာ ​လူ​ထု​တို့​၏ ​အ​စာ​ရိ​က္ခာ ​ရ​ရာ ​အ​ဓိ​က ​မ​ကျ”​ဟု ​ဆို​ထား ​သည်​မှာ ​လုံး၀ ​မှား​ယွင်း​ပါ​သည်။
၃။ “​ဒေ​သ​ခံ​များ​နှင့် ၄င်း​တို့​တွေ့​ဆုံ​ရာ​တွင် ​စီး​ပွား​ရေး ​လူ​မှု​ရေး ​အ​ကြောင်း​များ​သာ​မေး​ပြီး ​ဒေ​သ​ခံ​များ​၏​သ​ဘော​ထား​ကို​ရ​ယူ​သည်​ဟု​သော်​လည်း​ကောင်း ​ကု​မၸ​ဏီ​ရှင်း​ပြ​ချက်​ကြောင့် ​ဒေ​သ​ခံ​များ​သ​ဘော​တွေ့​ကြ​သည်” ​ဟု​ဆို ​ထား​ပါ​သည့် ၄င်း​တို့​၏​လေ့​လာ​ကွင်း​ဆင်း​မှု​အ​စီ​ရင်​ခံ​စာ​တွင်း ​ဖေါ်​ပြ​ထား​ချက်​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့ ​နမ့်​တူ​မြစ်​ချောင်း ​တ​လျှောက်​နေ ​ဒေ​သ​ခံ​များ​က ​ကန့်​ကွက်​ပါ​သည်။
​ရေ​ကာ​တာ​ဆောက်​မည့် ​အ​နီး​တစ်​ဝိုက်​တွင်​နေ​ထိုင်​လျက်​ရှိ​သည့် ​ဒေ​သ​ခံ ​တစ်​ချို့​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့​မေး​မြန်း​ချက်​အ​ရ ​ဒီ ​ကိ​စ္စ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး ​သူ​တို့ ​ကု​မၸ​ဏီ​အ​ဖွဲ့​က ​ဆိုး​ကျိုး​အ​ကြောင်း​ကို​လာ​ရောက် ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့ ​ခြင်း ​မ​ရှိ​ခဲ့​ပါ။ ​သူ​တို့ ​ပြော​တာ​က ​ရေ​က​တာ​တည်​ဆောက်​ဖို့​အ​စီ​အ​စဉ်​ရှိ​တာ​ကို​ဘဲ​ပြော​ဆို​ခဲ့​တာ​ပါ ​ကျွန်​တော်​တို့​ရဲ့ ​စား​ဝတ်​နေ​ရေး​အ​ကြောင်း​ကို ​မေး​ခဲ့​တယ်။ ​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​ခြင်း​ရဲ့ ​ဆိုး​ကျိုး​အ​ကြောင်း​ကို​သူ​တို့​ပြော​ပြ​ခြင်း​မ​ရှိ​တဲ့​အ​ပြင် ​ဆွေး​နွေး​ခြင်း​လည်း ​မ​ရှိ​ခဲ့​ဘူး​လို့” ​ဒေ​သ​ခံ​ဖြေ​ကြား​ခဲ့​ပါ​သည်။ ​ဤ​သို့​ဆို​လျှင် ​ဒေ​သ​ခံ​များ ​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​ခြင်း​အ​ပေါ် ​သ​ဘော​တွေ့​သည် ​ဆို​သည်​မှာ ​မ​ဖြစ်​နိုင်​ချေ။
၄။ ​ကု​မၸ​ဏီ​၏​လေ့​လာ​ဖေါ်​ပြ​ထား​သည့် ​စာ​အ​တွ​ငး်​တွင် ​ဤ​ရေ​ကာ​တာ ​တည်​ဆောက်​မည့်ေ ​န​ရာ​သည် ​ဘူ​မိ ​ဗေ ​ဒ​အ​ရ ​အ​နှောက်​အ​ယှက် ​မ​ရှိ၊ ​င​လျှင်​အ​န္တ​ရာယ်​အ​ကြောင်း​လုံး၀ ​မ​ဖေါ်​ပြ​ထား​ပေ။၊ ​ဤ​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​သည့် ​နေ​ရာ​သည် ​ကျောက်​ကြံ ​ပြတ်​ရွေ့​ကြော​ရှိ​သည့်​နေ​ရာ​ဖြစ်​သည်။ ​ထို​ကြော​ပေါ်​တွင် ​မြန်​မာ့​သ​မိုင်း​အ​ရ ၁၉၁၂ ​တွင် ​အ​ပြင်း​ထန်​ဆုံး​င​လျင်​လုပ်​ခဲ့​သည်။
SN Power ​က​အ​ထက်​ပါ​အ​ချက်​များ​ကို ​ထိန်​ချန်​ထား​ခြင်း၊ ​အ​ကြောင်း​အ​ကျိုး ​မ​ဆီ​လျှော်​စွာ ​တင်​ပြ​နေ​ခြင်း ​မှာ ​များ ​စွာ ​စိုး​ရိမ်​ပူ​ပန်​စ​ရာ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ​ထို​ကြောင့် ​ကျွန်ုပ်​တို့​သည် ​လူ​ထောင်​ပေါင်း​များ​စွာ ​မှီ​ခို​နေ ​ရ​သော၊ ​ကျွ​နု်ပ်​တို့​ချစ်​မြတ် ​နိုး​သော ​န​မ္မ​တူ​မြစ်(​ဝါ)​မြစ်​ငယ်​မြစ် ​ကံ​ကြ​မ္မာ​ကို ​နော်​ဝေး​ကု​မၸ​ဏီ​၏ ​လက်​အ​တွင်း ​သို့​မ ​ကျ​ရောက် ​စေ​သင့်​ပါ။
– ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ ​အ​ပါ​အ​ဝင်၊ ​တည်​ဆောက်​နေ​သည့် ​န​မ္မ​တူ​မြစ်​ပေါ်​မှ ​ရေ​ကာ​တာ​များ​နှင့် ​တည်​ဆောက်​ရန် ​စီ​စဉ်​ထား​သည့် ​ရေ​ကာ​တာ ​များ​အား​လုံး​ချက်​ချင်း​ရပ်​ဆိုင်း​ထား​ရန်။
– ​အ​နာ​ဂါတ်​တွင်​န​မ္မ​တူ​မြစ်​ပေါ်​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​ရန်​စီ​စဉ်​ရာ​တွင်​ပွင့်​လင်း​မြင်​သာ​ပြီး ​မြစ်​ကြောင်း​တ​လျှောက်​ထိ​ခိုက်​မည့် ​ရေ​အောင်း​ဒေ​သ​အား​လုံး​ကို​ကြို​တင် ​လေ့​လာ​ရ​မည်။
– ​အ​နာ​ဂါတ်​တွင် ​န​မ္မ​တူ​မြစ်​တ​လျှောက် ​မည်​သည့်​ရေ​ကာ​တာ​စီ​မံ​ကိန်း ​များ​ကို​မ​ဆို​စီ​စဉ်​မည်​ဆို​ပါ​က ​သက်​ရောက်​မှု ​ခံ​စား​ရ​မည့် ​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​များ​အား ​ကြို​တင်​အ​သိ​ပေး​ခြင်း၊ ​လွတ်​လပ်​သည့် ​သ​ဘော​တူ​ညီ​ချက် ​ဦး​စွာ​ရ​ယူ​ရ​မည်။
– ​တိုင်း​ရင်း​သား​ဒေ​သ​အ​တွင်း​ဖြစ်​ပေါ်​နေ​သည့်​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​များ​အား​စေ့​စပ်​ဆွေး​နွေး​ပြီး​ဖက်​ဒ​ရယ်​စံ​နစ်​ပေါ်​ထွန်း​ကာ ​စစ်​မှန်​သည့်​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး၊ ​သ​ဘာ၀​သံ​ယံ​ဇာ​တ​များ​အား ​ဗ​ဟို​မှ ​ချုပ်​ကိုင်​ခြင်း​မှ​ရပ်​တန့်​၍ ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​ကို ​ထိ​ခိုက်​စေ​မည့် ​န​မ္မ​တူ​ရေ​ကာ​တာ​များ ​ပြန်​လည်​သုံး​သပ်​ပြီး ​လူ​ထု​အား​ပွင့်​လင်း​စွာ ​ရှင်း​လင်း​ချ​ပြ​ရန်။
​ထမ်း​အိုက် + ၉၅ (၀) ၉၄-၅၃၁၃-၂၇၅၅
​ရှမ်း​လူ့ ​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဏိုင်
​စိုင်း​ခွန်း​မိုင် + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉
​စိုင်း​ခေး​ဆိုင် + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၇၂-၂၀၃၁
– ​လျှပ်​စစ်​စွမ်း​အင်​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န (​နေ​ပြည်​တော်)
– ​ရှမ်း​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​အ​ဖွဲ့​ချုပ် / SNLD (​ဗ​ဟို)